အသက်ချင်းကွာပေမဲ့ Wu Lei နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ Dilireba | News Bar Myanmar
အသက်ချင်းကွာပေမဲ့ Wu Lei နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ Dilireba
တရုတ်ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွဲ The Long Ballad ကတော့ ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးချိန်မှာပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်သူ Dilraba Dilmurat နဲ့ Leo Wu Lei တို့ရဲ့ တွဲဖက်ညီစွာသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။
Dilireba နဲ့ Wu Lei တို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာသာမက ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာလည်း အပေးအယူရှိနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆိုရင် မကြာခဏဆိုသလို trending အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ မကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview မှာတော့ ၂၈ နှစ်အရွယ် Dilireba ဟာ သူမနဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Wu Lei နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြထားတာတွေရှိနေပါတယ်။
Wu Lei ကတော့ Dilireba ထက် ၇ နှစ်ငယ်တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အသက်အရွယ်ကွာခြားတယ်လို့မထင်ရလောက်တဲ့အထိ အဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ Dilireba က ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲမထွက်ခင်တုန်းက အသက်ချင်းကွာခြားတဲ့ Dilraba နဲ့ Wu Lei တို့ဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ရိုက်ကူးနိုင်ပါ့မလား? လိုက်ဖက်ပါ့မလား? ဆိုပြီး အများအပြားက တွေးတောပြောဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အသက်အရွယ်ခြားနားနေမှုက သိသာမယ့်အပြင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကွာခြားမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Diliraba က “ကျွန်မလည်း ပရိသတ်တွေပြောသလိုမျိုး အသက်ကွာနေတာနဲ့ပြီး တွေးပူမိပါ​သေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မလည်း ငယ်ပါသေးတယ်။ ကျွန်မလည်းအခုမှ ၂၀ ကျော်လေးပဲရှိသေးတာပါ” ဆိုပြီး စနောက်ကာ ဖြေခဲ့ပါတော့တယ်။ ထို့နောက် “တကယ်တော့ ကျွန်မက အလကားသပ်သပ်တွေးပူမိနေတာပါ။ ရိုက်ကွင်းကိုလည်းရောက်ကော Wu Lei က ကျွန်မထက်တောင် ရင့်ကျက်နေပြီး သရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပိုင်နိုင်နေတယ်။
တကယ့်ကို အားကိုးချင်စရာ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်နဲ့တူအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ရိုက်ကူးရေးမှာ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်အောင် ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာ သူ့အရွယ် တခြားသရုပ်ဆောင်တော်တော်များများထက် ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့ပုံပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Wu Lei နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာဟာ အလွန်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြည့်ပြောပေးခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲထုတ်လွှင့်ပြသနေစဥ်မှာတော့ Diliraba နဲ့ Wu Lei ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ကြိုးစားမှုတွေဟာ ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးခြင်းကိုရရှိခဲ့သလို အဓိကသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ အပေးအယူမျှစွာ လိုက်ဖက်ညီနေမှုတွေကိုလည်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်နေကြပါတော့တယ်။ Dilireba နဲ့ Wu Lei တို့ရဲ့ The Long Ballad ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ကြည့်လို့အလွန်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တာကြောင့် မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ကြည့်ကြပါဦးနော်။
Next လူသိများကျော်ကြားနေတဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အောက် ထိုင်းသရုပ်ဆောင်မင်းသား (၈) ဦး »
Previous « OCN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ "Island" ဇာတ်လမ်းတွဲက​နေ အပြီးတိုင် နုတ်ထွက်​လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Seo Ye Ji